Guddiga Doorashooyinka Puntland oo si rasmi rasmi ah ugu dhawaqay Furashada Axsaabta siyaasadeed. | Maakhir News	Home
Tuesday, September 11th, 2012 | Posted by MaakhirNews Guddiga Doorashooyinka Puntland oo si rasmi rasmi ah ugu dhawaqay Furashada Axsaabta siyaasadeed.
Garowe(maakhirnews):- Guddiga kumeelgaarka ah ee Doorashooyinka Puntland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay Furashada Axsaabta Siyaasadeed ee Puntland.
Shir-saxaafadeed ay si wada jir ah xarunta Hay’adda Cilmibaarista Puntland maanta ugu qabteen xubnaha guddiga Kumeel-gaarka ah ee doorashooyinka Puntland iyo Guddoomiyaha guddiga islamarkaana ay goobjoog ahaayeen Masuuliyiinta Hay’adda Cilmi-baarista Puntland ee PDRC ayaa looga dhawaaqay in ay furan yihiin islamarkaana la samaysan karo Axsaabta Siyaasadeed ee Puntland.
Guddoomiyaha guddiga Doorashooyinka Puntland Maxamed Xasan Barre oo shir-saxaafadeedkan ka hadlay ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muwaadiniinta reer Puntland ay Axsaabta Siyaasadeed ee Puntland furan karaan laga bilaabo Maanta oo ay Taariikhdu tahay 11ka September 2012.
Guddoomiyuhu wuxuu sheegay in ku dhawaaida arrintani dastuuriga oo mudo badan soo socotay guddiguna uu ka shaqaynayay uu shacabku aad uga dhursugayay islamarkaana ay jiraan dad badan oo sugayay ku dhawaaqida arrintan si ay axsaabtooda u samaystaan.
Guddoomiyaha guddiga Doorashooyinka Puntland Maxamed Xasan Barre wuxuu sheegay in guddigiisu ay farsamo ahaan mudo ugu hawlanaayeen dardargalinta Geedi-socodka Hanaanka dimoqraadiyada ee Puntland islamarkaana ku dhawaaqida furashada Axsaabta ee maanta ay ka dambaysay markii la soo dhamaystiray hanaankii ansixinta islamarkaana Golayaasha dawlada oo Baarlamaanku uu ugu dambeeyay ay ansixiyeen xeerarkii axsaabta siyaasadeed ee Puntland lagu hagi lahaa, Madexweynuhuna uu saxiixay.
Guddoomiyuhu wuxuu sheegay in mudada diiwaangalinta Axsaabta siyaasadeed ee Puntland ay tahay 3-bilood oo ka bilaabmaysa maanta oo ay taariikhdu tahay 11ka September 2012, Marka ay dhamaatana wuxuu hubinayaa ururada buuxiyay shuraadaha furashada axsaabta siyaasadeed ee guddigu uu soo gudbiyay.
Intaasi kadib waxaa hadalka qaatay C/risaaq Axmed Shoole oo xubin ka ah guddiga Doorashooyinka Puntland wuxuu saxaafada u akhriyay Hanaanka iyo Habraaca Diiwaan galinta Ururada Siyaasadeed ee Puntland.
Hoos ka akhriso qodobadan oo Nuqul ka mid ah ay Puntlandi heshay.
HANNAANKA IYO HABRAACA DIIWAANGELINTA URURRADA SIYAASADEED EE PUNTLAND 1. Guddiga Doorashhooyinka ee KNIG ayaa ka masuul ah qabashada araaajida diiwaan-gelinta ee ururada siyaasada iyo xafidaada dukumantiyada ay U soo gudbiyaan ururradu.
6. Urur kasta oo doonaya in loo diiwaangeliyo urur siyaasadeed waa inuu ku soo qortaa arji foomka Ioogu talagalay, kuna soo hagaajiyaa Guddiga isagoo arjiga ku Iifaaqaya caddaymaha iyo qoraalada soo socda:-
a. 10 Nuqul oo daabacan oo ah xeerka ururka . Liiska magacyada aassaasayaasha ururka.
g. Qaab-dhismeedka ururka oo ay ku Caddahay magaca ururka oo dhan saxiixaa Nootaayo sharciyeysan. ku qabtay shirkii assaaska ururka ee ugu horeeyay iyo habka uu u qormayo marke la soo gaabiyo, calaamadaha ururka iyo hal-ku­dheggiisa. ururka,|VVM.
8. Waxaa araajida Iagu soo hagaajinayaa xarunta dhexe ee Guddiga Doorashooyinka Puntland oo ku taala Nlagaalada Garoowe ka soo horjeedka Xarunta Diakonia. Foomamka waa in la keeno xarunta dhexe ee Guddiga. Waxa uu Guddigu siinayaa urur kasta markuu Keeno araajida Caddeyn muujinaysa ka qabashada arjiga. Waxaa kaloo ururka ku waajib ah inuu qaato Caddeynta.
10. Urur/xisbi kasta waa inuu xubin ka noqon Karo qof kasta oo ah muvvaadin Puntland ah.
13. Araajida iyo Iifaaqyada la socoda waa dukumantyo ummadded ( Public document). Guddigu wuxuu xaq u Ieeyahay inuu weydiisto madax aururka Wixii macuulmaad dheeraad ah ee uu u baahdo.
Guddiga Doorashooyinka Puntland ee KMG. Xarunta Dhexe ee Guddiga